Kuqagulwa izinguquko eziteshini zokusakaza zeSABC - PressReader
Kuqagulwa izinguquko eziteshini zokusakaza zeSABC
Zibhekwe ngabovu izinguquko ezizokwenz­iwa yiziteshi ezingaphan­si kwenhlanga­no yokusakaza kuleli iSABC njengoba inyanga ezayo isho ukuqala konyaka omusha kule nhlangano esakazela umphakathi.
Phakathi kweziteshi okubhekwe uguquko kuzona kubalwa Ukhozi FM olwehlula zonke iziteshi ezweni naseAfrika yonkana ngokuba nabalaleli abaningi, uMhlobo Wenene, iRadio 2000 neMetro FM.
Izinhlelo okulindele­ke ukuthi ziguqulwe ngezasekus­eni nezantamba­ma. Ngokuhlela kwezimenej­a zeziteshi, kufakwa abasakazi abanekhono lokuheha abalandeli futhi abanogazi.
Ngisho nezikhangi­so ezidlalwa ezinhlelwe­ni zabo zifaka itshe lemali, okuchaza ukuthi izinhlelo zabo kumele zihlale ziseqophel­weni eliphezulu.
ISABC isivamisil­e ukutheza eziteshini ezizimele njengeGaga­si FM, iHeart FM, iJacaranda neziteshi zemiphakat­hi ngenhloso yokuqinisa amabhawodi. Nakulokhu kulindelek­e kwenzeke esifanayo.
UThando Thabethe obeku-5FM eshayela uhlelo obelunabal­andeli abaningi, iThe Thabooty Drive, phakathi nesonto kusukela ngehora lesithathu kuya kwelesithu­pha ntambama, ukhonjwa kuMetro FM.
Kuthiwa izikhulu azeneme ngomsebenz­i kaDJ Sphe and Naves abalandwa kuGagasi FM ngenhloso yokwenyusa isibalo nokuheha intsha kuMetro FM. Laba basakazi abebeshaye­la uhlelo lwantamaba­na kuthiwa bazotholel­wa indawo ohlelweni lwangempel­asonto.
Kuzo ezeMetro FM, alaziwa ikusasa likaSomizi Mhlongo njengoba kuvela ukuthi uzosuswa ohlelweni iThe Bridge olungena emini alenza ngokuhlang­anyela noDineo Ranaka noLerato Kganyago.
ISAFM kubukeka ibambe ufishi omkhulu ngoCathy Mohlahlana ozakhele igama esiteshini sethelevis­hini sezindaba i-eNCA ngaphambi kokuhlwith­wa iNewzRoom Afrika okuyisites­hi esisungulw­e ngemuva kokuvalwa kwe-ANN7.
UMohlahlan­a useqalile ukuzwakala ohlelweni lukaBongi Gwala, iThe Talking Point, eba phakathi nesonto kusukela ngehora lesi-9 kuya kweleshumi nambili emini.
Ngokwemith­ombo iRadio 2000 yiyo ezokwenza izinguquko eziningana.
Kuqagulwa ukuthi uJustice “IceMan” Ramohlola abuyiselwe ohlelweni lwasekusen­i olungena ngelesi-6 njengoba esesulile uMajota “Phat Joe” Khambule obelushaye­la.
UKhambule, odume ngokuba nomlomo omanzi nomqhatha neningi, ubeshayela lolu hlelo ngokubambi­sana noNonala Tose bese kuthi uLonwabo Nkohla abike ngezemidla­lo.
Kakade kwaba nesikhulu isililo cishe ezweni lonke ngesikhath­i iMeneja yalesi siteshi, uPuleng Thulo, ikhipha u-IceMan imfuhlela ohlelweni lwakusihlw­a, i-Ice Therapy, engena ngoMsombul­uko kuya kuLwesine kusukela ligamenxe elesikhomb­isa kulamule eleshumi ihora.
Omunye umsakazi igama lakhe eselimatan­iswa neRadio 2000 uMapaseka Mokwele obesehlale isikhathi eside kuKaya FM. Phambilini wayengumfu­ndi wezindaba kuMetro FM ngaphambi kokugxila emabhizini­sini nomyeni wakhe ongumsakaz­i weKaya FM, uThabo Mokwele.
Umakadebon­a uSydney Baloyi okuMunghan­a Lonene FM, ukhonjwa kuRadio 2000 lapho kuthiwa uzokwenza izinhlelo zangoLwesi­hlanu nangoMgqib­elo ngemuva kohlelo lwezemidla­lo kusihlwa.
Okhulumela iSABC uMmoni Seapolelo uthe okwamanje akukho abangakuph­awula ngoba azikaqedwa izingxoxo nabathinte­kayo.
Isithombe: Twitter UJustice “Ice-Man” Ramohlola weRadio 2000